Arakan Eagle: March 2013
စီအန်အန်က တင်ပြခဲ့သော ရခိုင်ပြည်နယ် အရေးအခင်း အစပိုင်း သတင်းများ
စီအန်အန်က တင်ပြခဲ့သော ရခိုင်ပြည်နယ် အရေးအခင်း အစပိုင်း သတင်းများ = = = = (၁) KMS
စီအန်အန်ဆိုတာ အမေရိကန်က တစ်ကမ္ဘာလုံးကို လွှင့်ထုတ်တဲ့ သတင်းသမား စစ်စစ် သတင်းဌာနတစ်ခုပါ။ ပြည်ပသတင်းဌာနတွေနဲ့ ပြည်ပအခြေစိုက် မြန်မာသတင်းဌာနတွေက မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ရခိုင်လူမျိုးတွေကို ရိုဟင်ဂျာတွေ ကြိုတင်ဝါဒဖြန့်ထားတဲ့အတိုင်း မဟုတ်မတရား ရမ်းတုပ် အပြစ်ဖို့ နေတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ် အရေးအခင်း စဖြစ်ချိန်မှာ ဒီ စီအန်အန်သတင်းဌာနက အောက်ခြေမှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ သတင်းကို ယူနိုင်တယ်ဆိုတော့ အံ့သြစရာပါ - အဲဒီတုန်းက ကျွန်မတို့ ဖေ့စ်ဘုတ်တောင် မသုံးတတ်သေးဘူး။ ဒီသတင်းတွေကို ဘယ်လို ကြည့်ရမှန်းလည်း မသိသေးဘူး။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် အခုမှ ဖတ်ရတော့ မဖတ်ဖြစ်လိုက်သူတွေ လေ့လာနိုင်အောင် တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်-
= = = မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ရိုဟင်ဂျာ အကြမ်းဖက်မှုကို မနှိမ်နင်းနိုင်သေး၊ ရခိုင်လူမျိုး ဒါဇင်နှင့်ချီ၍ ရေတွင် အဆိပ်ခတ်မှုကြောင့် ဆေးရုံရောက် = = = (ဘာသာပြန်)
[သတင်းက အဟောင်းပါ - ရခိုင်ပြည်နယ် အရေးအခင်း စဖြစ်စက သတင်းပါ - ရိုဟင်ဂျာ အကြမ်းဖက်သမားတွေက ဒီအရေးအခင်းကို ဦးဆောင်တယ်၊ ဒေါက်တာထွန်းအောင်က နောက်ကွယ်က ကြိုးကိုင်တယ်လို့ ပါတဲ့ (၂၀၁၂)ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၁၂)ရက်နေ့က စီအန်အန် သတင်းပါ။]
Rohingya Violence in Arakan State of Burma unabated, Dozens of Araken Hospitalized for Water Poisoned
By EthnicVoice | Posted June 12, 2012 | New York, New York
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွားနေသော အကြမ်းဖက်မှုကို မနှိမ်နင်းနိုင်သေးဘဲရှိနေရာတွင် ရိုဟင်ဂျာ စည်းလုံးညီညွတ်ရေး အစည်းအရုံး (အာရ်အက်စ်အို -RSO) နှင့် အာရကန် ရိုဟင်ဂျာ အမျိုးသား အစည်းအရုံး (အာနို - ARNO) တို့က စစ်တကောင်းနယ် ကောက်ဘဇားမှ သူတို့ လေ့ကျင့် ပေးထားသော လူများ၏ အထောက်အကူဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ အကြား နယ်စပ်မြို့ဖြစ်သည့် မောင်တောမြို့၌ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုကို ဦးဆောင်ပြုလုပ်ရာ ရခိုင်လူမျိုး အများစု ဖြစ်သည့် လူတစ်သောင်းခန့်သည် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ဖြစ်သွားကြလျှက် သူတို့၏ ကိုယ်ပိုင် ပြည်နယ်ထဲတွင် ဒုက္ခသည်ဘ၀သို့ ရောက်သွားကြရသည်။
Since violence in Araken state is unabated, about ten thousand of people, most of them are Arakan people become homeless and refugees in their own state after Rohingya Solidarity Organization (RSO) and the Arakan Rohingya National Organization (ARNO led the violence with the support of their trained men from COX BAZAR, Chittagong, border town of Maungday between Burma and Bangaladesh.
မြန်မာစစ်တပ်နှင့် လေ့ကျင့်ရည်ပြည့်ဝသော ရိုဟင်ဂျာ အကြမ်းဖက်သမားများ အကြား ထိတွေ့မှုများသည် နေရာအများအပြား၌ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ အစိုးရတပ်များသည် အားပျော့နေဟန်ရှိပြီး ရိုဟင်ဂျာ အကြမ်းဖက်သမားတို့၏ မာကြော၍ အစီအစဉ်ကောင်းစွာ ချမှတ်ထားသော မဟာဗျူဟာကြောင့် အခြေအနေကို ပိုမိုကောင်းမွန်လာအောင် ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း မရှိပေ။
The clashes between Burma army and the well trained Rohingya terrorist have taken place many area. It seems the government troop are very weak and could not make the situation better because the strong and well planned strategy of Rohingya terrorist.
ယမန်နေ့ ညနေပိုင်းက ယခုဖြစ်ပွားနေသော အကြမ်းဖက်မှု၏ နောက်ကွယ်မှ ဒေါက်တာထွန်းအောင် နှင့် သမီးဖြစ်သူတို့အား အာဏာပိုင်တို့က ထိန်းသိမ်းလိုက်သည်။ ဒေါက်တာထွန်းအောင်သည် အာရကန် စည်းလုံး ညီညွတ်ရေး အစည်းအရုံး [RSO]၏ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး UNHCR ၀န်ထမ်း တစ်ဦးလည်း ဖြစ်သည်။ သူ့ကို စစ်တွေမြို၌ ဖမ်းဆီးမိခြင်း ဖြစ်ပြီး သူ့သမီးကိုလည်း လေဆိပ်၌ ရန်ကုန်မြို့သို့ သွားမည့် လေယာဉ်ကို စောင့်ဆိုင်းနေစဉ် ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
Yesterday evening, Dr.Tun Aung and his daughter who are the behind of current violence were detained by the authority. Dr. Tun Aung isaleader of the Rohingya Soliderity Organization andastaff of UNHCR. He is detained in Sittwe and his daughter was also arrested while she is awaiting the flight at Sittwe airport to Rangoon.
တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ရိုဟင်ဂျာ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးပြည်နယ် ကြေညာရန် အတွက် ဒေါက်တာထွန်းအောင် နှင့် ပါဝင် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နေကြသော အန်ဂျီအို ၀န်ထမ်း အချို့ကို မြန်မာ အာဏာပိုင်များက ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။ ၎င်း အန်ဂျီအိုဝန်ထမ်းများမှာ နယ်သာလင်နိုင်ငံမှ ဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်ရပေသည်။ ရရှိသော သတင်းများအဆိုအရ ယင်း အန်ဂျီအို ၀န်ထမ်းများနေထိုင်ရာ ဗလီနှင့် ကပ်လျက် နေအိမ်တွင် လက်နက်များကို အာဏာပိုင်တို့က တွေ့ရှိသည်ဟု ဆို၏။
At the same time, Burmese authority found out that some NGO staffs were involved and cooperated with Dr. Tun Aung for declaring the Autonomous Rohingya state in Araken state. Those NGO staffs are believed from Netherland. The news said, authority also found out some weapon at the home close to Mosqe where those NGO staffs are residing.
နောက်သတင်းစကား တစ်ခုမှာ စစ်တွေမြို့တွင် ပေးဝေသော ရေကို သောက်မိခြင်းကြောင့် ဒါဇင်ပေါင်း များစွာ အရေအတွက် ရှိသော လူများသည် ဆေးရုံတက်နေကြရသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်သို့ လွှတ်ပေး သော ရေပေးသည့် ဆည်ကို ရိုဟင်ဂျာ အကြမ်းဖက်အုပ်စု လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ရက်က အဆိပ်ခတ်ခဲ့သည်။ အာဏာပိုင်တို့က ယခုအခါ ရေလွှတ်ခြင်းကို ရပ်တန့်ထားလိုက်သည်။ သို့ရာတွင် ဤသတင်းကို မရသေးသော လူများစွာ ရှိပြီး အာဏာပိုင်တို့က ရေအလွှတ်မရပ်မီ လှောင်ထားသော ရေကို သုံးစွဲနေကြဆဲ ဖြစ်သည်။
Another story is dozen of people were hospitalized for drinking the water that supplying in Sittwe. The water dam to release for Araken state were poisoned by Roghingya terrorist group last two days ago. The authority now stop releasing water. However, there are many people who could not receive the news still use the water that they stored from the pipe just before the authority stop releasing water.
ယခုတွင် ရခိုင်လူမျိုးတို့ ပိုင်ဆိုင်သော အိမ်ပေါင်း (၃၀)ထက်မနည်းကို အကြမ်းဖက်သမားတို့က မီးတင်ရှို့ခဲ့ကြပြီး ရာနှင့်ချီ၍ ဒဏ်ရာရကြကာ သေဆုံးမှု [တစ်] ဒါဇင်မျှ ရှိသည်။ လူရာချီ၍ ပျောက်ဆုံးနေကြသည်မှာ သုံးရက်ရှိပြီဖြစ်ပြီး အကြမ်းဖက်မှု စတင်သည့် နေ့ကပင် ရိုဟင်ဂျာတို့က ၀ိုင်းထားသဖြင့် ထိုလူများ မည်သည့်နေရာသို့ ရောက်နေမှန်း မသိနိုင်ပေ။ ထိုလူအများစုမှာ ရခိုင်လူမျိုး ၁၀ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ရိုဟင်ဂျာ ၉၀ရာခိုင်နှုန်း ရှိသော မောင်တောမြို့နှင့် စစ်တွေမြို့တို့တွင် ရိုဟင်ဂျာ တို့အကြား၌ နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။
Today, at least more than 30 houses that belong to Araken people were burned down by terrorist. hundreds of injured and dozen of death, hundreds still missing for three days without knowing where they are and if they still alive beacause they were surrounded by Rohingya since the first day of violence. Most of those people lived among the Rohingya community in Maungda and Sittwe were 10 % Araken and 90 % of Rohingya.
ယမန်နေ့က မြန်မာသမ္မတ [ဦး]သိန်းစိန်က နိုင်ငံသို့ မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့သော်လည်း အကြမ်းဖက်မှု အခြေအနေမှာ တစုံတရာ ပြောင်းလဲခြင်း မရှိပေ။ မြန်မာ အာဏာပိုင်များက ရခိုင်ပြည်နယ်မှ နိုင်ငံသားများအား အကာအကွယ်မပေးနိုင်ပေ။ မြန်မာတို့ သည် အကြမ်းဖက်မှုကို ရပ်တန့်စေရန် ကြိုးစားနေကြသော်လည်း ရိုဟင်ဂျာ အကြမ်းဖက်သမားများက သေနတ်ပစ်ခတ်၍ တုန့်ပြန်ခြင်းကို ခံကြရသည်။ ရိုဟင်ဂျာ လက်နက်ကိုင် တပ်များသည် အီရတ်နိုင်ငံလုပ် လက်နက်များကို အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
Although, Burma president Thein Sein gave state address yesterday, there is nothing change about the violence. The Burmese authority failed to protect the citizen of Araken state. The Burma are trying to stop the violence, but they were responded with the shoot from Rohingya terrorist members. Rohingya armed forces used the weapons that made in Iraq.
Posted by Eagle info dash at 18:22 No comments:
ဒေါက်တာအေးချမ်း၏ သမိုင်းဆရာရှင်းလင်းပွဲတွင် မူစလင်ကုလားတစ်ကောင်က မေးခွန်းတစ်ခုမေးစာ ပို့ပေးရာ......ပါမောက္ခဒေါက်တာအေးချမ်းက အောက်ပါအတိုင်းဖြေကြားခဲ့သည်။.................. မေးခွန်း - အခုလို ရန်ကုန်ကို လာဟောပြောတာဟာ ဘာသာရေးစစ်ပွဲ မဖြစ်ဖြစ်အောင် လှုံ့ဆော်နေတာလား။ ဆရာအေးချမ်း - ကျွန်တော် ကြောက်တတ်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် ကျွန်တော် စစ်ကိုရှောင်ချင်တယ်။ ဒီမေးခွန်း မေးတဲ့သူကို ကျွန်တော် မေးချင်တယ်။ ခင်ဗျားအိမ်မှာ ကျွန်တော် တစ်ရက်နေမယ်။ နောက်တစ်ခါ နောက်တစ်ရက် နေပါရစေဆိုပြီး ပြောမယ်။ နောက်ထပ် တစ်ပတ်လောက် တိုးနေပါရစေဆိုပြီး ပြောမယ်။ နောက်ထပ် တစ်နှစ်၊ နှစ်နှစ်လောက် တိုးနေပါရစေဆိုပြီး ပြောမယ်။ နောက် ကျွန်တော်က ခင်ဗျားကို ကန်ထုတ်ပစ်မယ်ဆိုရင် ခင်ဗျားလက်ခံနိုင်ပါ့မလား။ အဲဒါကိုပဲ ဖြေကြည့်လိုက်ပါ။ ဒီမေးခွန်းကိုမေးတဲ့သူကိုယ်တိုင်ဖြေပေးပါလို့ဆရာပြောသော်အခါ ထိုသူကိုယ်တိုင် ထ၍ "လက်မခံနိုင်ပါ" ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်...
ဒေါက်တာအေးချမ်း၏ သမိုင်းဆရာရှင်းလင်းပွဲတွင် မူစလင်ကုလားတစ်ကောင်က မေးခွန်းတစ်ခုမေးစာ ပို့ပေးရာ......ပါမောက္ခဒေါက်တာအေးချမ်းက အောက်ပါအတိုင်းဖြေကြားခဲ့သည်။..................
မေးခွန်း - အခုလို ရန်ကုန်ကို လာဟောပြောတာဟာ ဘာသာရေးစစ်ပွဲ မဖြစ်ဖြစ်အောင် လှုံ့ဆော်နေတာလား။
ဆရာအေးချမ်း - ကျွန်တော် ကြောက်တတ်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် ကျွန်တော် စစ်ကိုရှောင်ချင်တယ်။ ဒီမေးခွန်း မေးတဲ့သူကို ကျွန်တော် မေးချင်တယ်။ ခင်ဗျားအိမ်မှာ ကျွန်တော် တစ်ရက်နေမယ်။ နောက်တစ်ခါ နောက်တစ်ရက် နေပါရစေဆိုပြီး ပြောမယ်။ နောက်ထပ် တစ်ပတ်လောက် တိုးနေပါရစေဆိုပြီး ပြောမယ်။ နောက်ထပ် တစ်နှစ်၊ နှစ်နှစ်လောက် တိုးနေပါရစေဆိုပြီး ပြောမယ်။ နောက် ကျွန်တော်က ခင်ဗျားကို ကန်ထုတ်ပစ်မယ်ဆိုရင် ခင်ဗျားလက်ခံနိုင်ပါ့မလား။ အဲဒါကိုပဲ ဖြေကြည့်လိုက်ပါ။
ဒီမေးခွန်းကိုမေးတဲ့သူကိုယ်တိုင်ဖြေပေးပါလို့ဆရာပြောသော်အခါ ထိုသူကိုယ်တိုင် ထ၍
Posted by Eagle info dash at 08:28 No comments:
စီအန်အန်က တင်ပြခဲ့သော ရခိုင်ပြည်နယ် အရေးအခင်း အစပိ...